Izigqibo ezi-5 zokuThengisa kwi-Intanethi ngo-2014 | Martech Zone
Ukuqala konyaka omtsha kuhlala kuza nezicwangciso zokuthengisa ezintsha, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nemincili ehlaziyiweyo malunga namathuba alindele naliphi na ishishini. Ukuba ulawula intengiso kwinkampani yakho, okunokwenzeka kunokuba kukhulu kakhulu. Ngethamsanqa, sinezinye iingcebiso zokukunceda ukhulise uphawu lwakho kunye nokulandelayo kwi-Intanethi ngo-2014. Nazi izigqibo ezi-5 zokuthengisa ezenziwa kwi-Intanethi eziza kwamkelwa namhlanje:
1. Yongeza umxholo wakho Marketing
Jonga u-2014 ukuba ube ngomnye unyaka kwiinkampani zokunyusa ukuthengisa kwazo. Ukususwa kwale ngxelo kukuba abathengisi bafuna ixesha kunye nezixhobo zokuvelisa umxholo owahlukileyo ukuze babalise ibali eliyinkampani. Kuzo zonke iinkampani ezincinci ekufuneka zenze indlela yazo yokufumana iindaba zeendaba zabathengi, kubalulekile ukuba umxholo ube nesandi esithandekayo. Imibutho emikhulu inezixhobo zokubetha isingqisho ngokuzingisa ukukhupha umxholo amaxesha amaninzi ngemini. Oko kwathethi, akubalulekanga ukugcina u-Jones 'kuloo metric kuphela kuba yi-9% ye-B2B kunye ne-7% yeenkampani ze-B2C ezicinga ukuba iqhinga labo lomxholo "lisebenza kakhulu." Ukudibanisa ukwahluka komxholo kuya kuqinisekisa ukukhula okuzinzileyo kumajelo asekuhlaleni alandelayo.
2. Yenza iMfono ePhambili
Ukuphucula umxholo wokusetyenziswa kwefowuni kubaluleke ngakumbi kunanini ngaphambili. Ukujonga imeko ethe ngcembe yokuyila kweselfowuni ngo-2017 i-87% yazo zonke izixhobo ezixhumeneyo ziya kuba zii-smartphones kunye neetafile. Into yokuqala ukuyikhupha kukuyila iwebhusayithi ephendulayo ukuze iphepha lewebhu lilungiselelwe ukuba lijongwe kwizixhobo zonke. Okulandelayo emgceni kukucoceka kwaye kulula ujongano lomsebenzisi ukunceda ukugcina abantu kwiphepha lakho. Abasebenzisi beselfowuni balindele ukufumana iimpendulo ngokukhawuleza kwaye ngokulula kuba bahlala behamba. Ukuba wenza ukhangela lula kwimpendulo yabo, baya kubuya.
3. Ukusasaza iiWings Media zakho
Ukuzama amajelo eendaba kwezentlalo kuya kuba yinto ebaluleke kakhulu kwi-2014 ngoku ukuba iingxilimbela ezimbini zentlalo, i-Twitter kunye ne-Facebook, "zihlawulelwa ukudlala" kwaye iposti iya kuhlala kuphela kwiifidi zeendaba kwimizuzu nje embalwa, ukuba ayingomzuzwana. Thatha ixesha lokuzama ezinye iinethiwekhi ezinje ngePinterest, Instagram kunye neTumbler. Zonke ezi ndawo zikhula ngesantya se-warp kwaye unakho ukunxibelelana nabalandeli ngokusebenzisa iphulo lokuyila, lomntu. IGoogle Plus yenye yenethiwekhi ebekelwe ukuphucula ubume bayo kwihlabathi loluntu kulo nyaka. Ukufumana i-niche efanelekileyo kwiGoogle Plus kunokuba nzima, kodwa izibonelelo zeziphumo eziphezulu zenjini yokukhangela ziya kuhlala zinceda.
4. Yitsho Ngemifanekiso
Amandla emifanekiso kunye nevidiyo ayothusa kubathengisi abakwi-Intanethi. Ngapha koko, i-web ishenxisa lonke ingqalelo kwilizwe elibonakalayo. Umzekelo, imifanekiso kuFacebook ifumana ukuthandwa ngakumbi, izimvo kunye nezabelo kunayo nayiphi na enye indlela yonxibelelwano. Ukongeza, uGoogle utshintshe iziphumo zophando ukukhuthaza imifanekiso ngaphezulu kweziphumo ezisekwe kwisicatshulwa. Ngapha koko, abathengi babathandayo baneswidi yamehlo ebonakalayo kusenokwenzeka ukuba ucofe ukujonga le infographic.
5. Gcina It Simple
Ukuba inye into eza kubamba ingqalelo yabantu kulo nyaka, ngumyalezo olula. Sukuwenza ngaphezulu komxholo. Iinkampani ezenze lula isigqibo sokuthenga (intsingiselo ikhuphe i-jargon jar) zazingama-86% amathuba okuguqula abathengi.
tags: UkuThengiswa kweMpahlakwi-infographicUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiSocial Media Marketing